Olana amin'ny tantely: ny Superfoods asli
Tantely fiompy ny mpandefitra dia iray amin'ireo natiora ny zavamananaina manan-danja indrindra. Zava-dehibe noho ny tantely ny famokarana sakafo isika olombelona satria mihinana zavamaniry amin'ny fandresen-dahatra, rehefa manangona mamimbony amin'ny voninkazo. Raha tsy misy tantely izahay Tena sarotra amin'ny tsy mitsaha-mitombo be ny sakafo.
Ankoatra ny fanampiana antsika miaraka amin'ny fambolena ilaina, manao tantely vokatra maro fa afaka mitadidy sy mampiasa. Ny olona no nanangona sy mampiasa azy ireo an'arivony taona sy ny fampiasana azy ho an'ny sakafo, flavoring, ary ny fanafody. Ankehitriny, ny siansa maoderina dia nahatratra ny zavatra efa fantatra foana: tantely vokatra mafy ny fanafody sy ny sakafo sarobidy.
Honey no voalohany, ary mazava indrindra vokatra izay tonga ao an-tsaina rehefa mieritreritra ny renitantely entana. Tsy mora foana misy amin'ny tsena ary maro ny olona mampiasa azy io ho toy ny sweetener eo amin'ny toerana voadio siramamy. Honey dia ny sakafo izay manao tantely amin'ny mamimbony avy amin'ny voninkazo fanangonana. Manosika ny mamimbony ho tantely amin'ny alalan'ny regurgitating ka mamela azy io no lasa etona ny nifantoka ny siramamy izay mahaforona ny Kilonga sakafo. Ankoatra ny siramamy, tantely dia ahitana soritry dia be vitaminina, mineraly, fibre, proteinina, ary zavatra hafa.
Ny tsirony ny tantely dia miavaka sy tsara ho an'ny hafa hafa siramamy. Fa ny soa tantely any lavitra mihoatra tsiro sy ny mamy. Honey dia manana tombontsoa ara-pahasalamana maro, na toy ny zavatra azonao mihinana sy ho toy ny loha fanafody. Fantaro anefa, fa ny tantely dia tokony ho ampiasainao manta sy unprocessed.
Mahasalama . Honey manan-karena amin'ny Mahasalama, izay manampy mba hanamboarana ny simba natao ny vatantsika, amin'ny alalan'ny poizina tontolo iainana. Ny mainty ny tantely, ny Mahasalama kokoa eo ao.
Allergy fanampiana . Raw sy ny tantely dia ahitana unprocessed allergens avy ny tontolo iainana, ao anatin'izany ny pollens, bobongolo, sy ny vovoka. Raha mihinana kely ny unfiltered tantely izay vokarina any amin'ny faritra an-toerana isan'andro, dia ho hitanao fa mahazo fanampiana avy amin'ny allergy soritr'aretina. By dosing amin'ny allergens ianareo kosa manao ny voajanahary tsimatimanota ho azy ireo.
Fandevonan-kanina ny fahasalamana . Honey naseho hanatsarana ny fandevonan-kanina tamin'ny fomba roa. Ao amin'ny tsinay ambony taratasy mivalona ny antibacterial fananan 'tantely dia afaka mampihena ny sehatra ny bakteria izay mahatonga ny fery. Ao amin'ny tsinaibe tantely dia manome probiotics mba hanampiana fandevonan-kanina.
Fanasitranana ratra . Amin'ny maha-loha menaka manitra, tantely dia azo ampiasaina mba hitsaboana ratra. Manana vokatra antibiotika ka miaro ratra madio mba afaka manasitrana haingana kokoa.
Anti-milaza zavatra vokany. Matsilo mamaivay no ampahany voajanahary amin'ny fanasitranana, fa ny ambany-kilasy, mitaiza mamaivay izay nampahory maro Amerikana mahantra noho ny sakafo dia manimba. Honey no fantatra mba hampihenana ny mitaiza mamaivay eo amin'ny lalan-dra izay manampy ny aretim-po. Ihany koa ny tahan'ny stabilizes ny tsara sy ny ratsy kolesterola.
Mikohaka fanafoanana. Amin'ny manaraka manana mangatsiaka hametraka ny sotrokely ny tantely ny kapoaky ny dite mafana. Honey Hihasimba ny kohaka ary tsy misy ihany koa porofo sasany fa mety hanampy mba hanasitrana ny hatsiaka sy ny fampihenana ny faharetany.
Soraty-2 Miady Amin'ny Diabeta. Ho an'ny olona amin'ny karazana-2 ny diabeta, zava-dehibe ny tsy hanafotra ny ra miaraka amin'ny siramamy. Honey Navoaka tsikelikely kokoa any an-ra tsy voadio siramamy, izay mahatonga azy ho tsara kokoa ho an'ny diabetics safidy.
Bee vovobony dia mitovy amin'ny tantely. Izany no vovobony izay efa nangonin'ny tantely avy amin'ny voninkazo sy feno ho granules kely. Fa ny tantely, ny vovobony baolina dia voatahiry ao amin'ny tohotra, ary ampiasaina ho toy ny loharanom-proteinina. Rehefa entana ny vovobony ho any amin'ny tohotra singa hafa dia nanampy ho azy anisan'izany anzima avy ny renitantely, ny rora, bakteria, ary ny mamimbony.
Ny olombelona, ​​renitantely vovobony dia sakafo powerhouse ary misy antony maro mampiasa azy io ho toy ny ampahany amin'ny sakafo tsy tapaka. Zava-dehibe ny mahafantatra fa tantely vovobony dia tsy hita ao amin'ny hafa ny vokatra tantely toy ny tantely sy ny mpanjaka Jelly. Koa tandremo ny tantely vokatra amin'ny additives vovobony. Ireo vokatra tsy ara-boajanahary ary mety mampidi-doza mihitsy aza ho.
Complete-tsakafo. Bee vovobony misy ny otrikaina rehetra ilaina isika olombelona ao anatiny granules kely. Manana proteinina, gliosida, matavy, Mahasalama, vitaminina, ary mineraly. Izy io dia sakafo feno.
Weight fanaraha-maso. Bee vovobony Efa hita mba hanampiana ny olona very sy ny fitantanana lanjany, rehefa ampiasaina ho toy ny fanampin ho sakafo ara-pahasalamana sy ny fanatanjahan-tena tsy tapaka. Mety hanampy amin'ny fandrisihana ny metabolism ny vatana.
Fandevonan-kanina ny fahasalamana. Ny fikarohana dia hita fa ny mihinana tantely vovobony dia afaka manatsara ny fandevonan-kanina ny fahasalamana. Izany dia azo hazavaina amin'ny alalan'ny ny zava-misy fa misy fibre ary koa probiotics.
Tsy fahampian-dra. Anemic marary nomena tantely vovobony Niaina fitomboana amin'ny liomena ao amin'ny ra. Nahoana izany no nitranga dia tsy takatra, fa toa tantely vovobony supplementation mba hanampiana ny olona amin'ny tsy fahampian-dra.
Ra haavon'ny kolesterola. Bee vovobony ho toy ny fanampin aseho ihany koa ny fandrindràna ambaratonga ny kolesterola ao amin'ny ra. Izany mahatonga ny tahan'ny kolesterola tsara (HDL) foana izy ka niakatra, raha ny haavon'ny ny kolesterola ratsy (LDL) midina.
Cancer fisorohana. Ao amin'ny Baiboly ny totozy, renitantely vovobony ao amin'ny sakafo nanakana ny fananganana ny vay.
Ho ela velona. Maro ny fanadihadiana dia nampiseho fa tantely vovobony manampy ny lasa miadana kokoa ny sasany dingana fahanterana. Toa ny hampitombo fahatsiarovana, mandrisika metabolism, hanamafy orina ny fo sy ny lalan-dra, ary manome zavatra mahavelona fa maro ny olona tsy manam araka izay mandrakizay.
Tsy tokony hafangaro amin'ny tantely, izay manome sakafo ny mpiasa tantely, mpanjaka Jelly dia ny sakafo ho an'ny tantely ny vadin'ny mpanjaka, ary koa ny olitra amin'ny zanatany. Royal Jelly dia iray amin'ireo lafin-javatra tompon'andraikitra manova ny olitra ho vadin'ny mpanjaka, fa tsy ny mpiasa fiompy. Fifehezan 'ny mpanjaka Jelly ahitana rano, proteinina, siramamy, kely ny matavy, vitaminina, Mahasalama, antibiotika antony, soritry mineraly, ary ny anzima. Izany dia ahitana ihany koa ny antsoina hoe mpanjakavavy tantely iombonana amin'ny asidra, izay mpikaroka ireo fanadihadiana, sy izay heverina ho ny fanalahidin'ny manova tsotra Tantely fiompy ho any an-vadin'ny mpanjaka.
Fikolokoloana hoditra. Jelly Royal dia hita amin'ny vokatra sasany loha hatsaran-tarehy satria mety hanampy hiarovana ny hoditra amin'ny masoandro. Mety fanitsiana mihitsy aza ny sasany amin'ireo efa fahavoazana vokatry ny masoandro, anisan'izany ny famerenana collagen sy ny fampihenana ny fahitana ny volontsôkôlà toerana.
Kolesterola. Toy ny tantely sy ny renitantely, na vovobony, mandany mpanjaka Jelly naseho hampifandanjana avy kolesterola tsara sy ratsy ao amin'ny ra.
Anti-fivontosana fananana. Misy fikarohana dia nampiseho fa mpanjaka Jelly, rehefa ho kansera nampidirany sela, dia afaka ela ny fitomboan'ny vay.
Fahasalaman'ny Fananahana. Misy mpanohana ny mpanjaka Jelly milaza fa afaka manatsara ny vehivavy mihitsy aza ny fahavokarana sy ny soritr'aretin'ny pms Velombelomy hatrany.
Fandevonan-kanina ny fahasalamana. Royal Jelly dia fantatra ihany koa mba ho afaka mba hampitonena ny toe-javatra maro avy amin'ny fery kibo ho-kanina ny fitohanana.
Ny vokatra Bee hafa
Raw, organika, sy unprocessed tantely, fiompy vovobony, ary ny mpanjaka rehetra Jelly somary mora ny mahita ao amin'ny toerana tena ara-pahasalamana ny toeram-pivarotana, na mbola tsara kokoa, beekeeper an-toerana. Misy vokatra hafa vitsivitsy atao amin'ny tantely ao amin'ny tohotra izay tsy nianatra ihany koa ka izay tsy ho mora ny hahazo ny tanana. Propolis, ohatra, no resinous zavatra izay ho avy Sap tantely sy izay mampiasa ny triatra kely asio tombo-kase sy ny lavaka ao amin'ny tohotra.
Fa ny olombelona, ​​propolis dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana loha. Tsy nisy sakafo sakafo vokatra, na dia azo ampiasaina mba hahatonga ny siligaoma. Propolis antibacterial manana fananana sy efa ela no nampiasaina ho toy ny loha mahasitrana ny fery, refin, ary ny hoditra rashes. Limited porofo mampiseho fa mety koa ny manampy hitsaboana Herpes, nify aretina, ary milaza zavatra aretina. Ny porofo dia tsy kevitra, fa propolis azo antoka ampiasaina.
Beeswax no matavy fananana izay mampiasa ny tantely mba hanao ny ampahany ny tantely tohotra. Tsy azo hanina, amin'ny heviny fa mafy ny mandevon-kanina. Tsy poizina, nefa tsy hahazo sakafo be dia be avy ao aminy raha miezaka ny mihinana azy. Inona no tsara raha dia manao makiazy voajanahary, savony, menaka, ary ny labozia.
Ny fampiasana Bee Products in Smoothies
Tantely, renitantely vovobony, ary ny mpanjaka rehetra Jelly afaka hanampy ho amin'ny smoothies. Ny zavatra lehibe momba ny tantely vovobony sy ny tantely dia lehibe izy ireo hanandrana ary koa ny hanome anareo mahafinaritra tombontsoa ara-pahasalamana. Bee vovobony dia tsy ho mamy tahaka ny tantely, fa tsara no manana tsirony. Izy io dia manan-karena ny sakafo, ka hampahafantatra izany miadana. Manomboka amin'ny voan-javatra vitsivitsy amin'ny fotoana sy hampitombo tsikelikely ny vola ampiasainao ho eo ny iray, ary ny iray sotrokely tablespoon isaky ny smoothie. Andramo mampifangaro renitantely vovobony ao amin'ny smoothies sy ny famafazan'ny teo amboniny toy ny mamafy amin'ny gilasy. Fa ny fomba fanamboarana smoothie manasongadina tantely vovobony, tsindrio ny rohy eto ambany.
Bee Vovobony Smoothies
Afaka manampy tantely malalaka ny smoothies eo amin'ny toeran'ny hafa sweetener mety ampiasaina. Tsy manambady tsara amin'ny hafa rehetra tsirony, fa afaka ihany koa ny hamirapiratra eo ny azy. Hatrany mitady manta voarindra sy tantely ary raha toa ka afaka mahita ny entana natao an-toerana, izany dia tsara kokoa. Jereo ny akaiky indrindra ny tsenan'ny tantsaha eo an-toerana ho an'ny tantely.
Ny tsirony ny mpanjaka Jelly dia tsy manintona ny olona rehetra. Mety ho tarta, ary toy ny sasany soraty izy, kely hafahafa. Soa ihany fa kely ihany no mila kely izany (momba ny sotrokely isan-smoothie) mba hahazo ny tombontsoa ara-pahasalamana ary afaka hanafina izany amin'ny smoothie tsirony amin'ny matanjaka kokoa. Raha ny marina, andramo pairing azy amin'ny tantely mba manafina ny tsirony.
Bee vokatra dia ny sakafo miavaka noho ny votoaty sy ny fahaizana hanasitrana ny vatan'olombelona amin'ny fomba maro. Foana Mitandrema rehefa mampiasa ireo vokatra raha toa ianao ka mahazaka tantely, na mety ho mieritreritra ianao. Raha tsy fahita firy, raha mahazaka ny tantely fanindronanao, misy vokatra ny renitantely, dia mety hahatonga anao hanana ny fanehoan-kevitra ihany koa.
Inona no traikefa amin'ny renitantely vokatra? Moa ve ianao manana toerana tena? Aza hilaza amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra eto ambany namela iray.
Inona no fantatrao momba ny Berb ...
Inona ny Berberine? Berberine dia sira amonium quaternary avy amin'ny vondrona protoberberine an'ny benzylisoquinoline al ...
Inona no fantatrao momba an'i St.J ...
[Inona no atao hoe St. John's wort] St. John's wort (Hypericum perforatum) dia manana tantaram-piainana ampiasaina ho toy ny fanafody nanomboka tamin'ny ...